के प्रहरी कानुन भन्दा माथिल्लो तहमा छ? « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
साममाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो ओएस नेपालको टिम ले कपि राइट सहित माग्यो । उक्त भिडियोमा गाडिबाट ओर्लेर पिसाब फेर्न गएका युवाहरु फर्केर गाडी चडेर सिट्बेल्ट बांध्न खोजिरहेका थिए तर तत्कालिन समयमा ट्राफिक आएर जरीवाना काट्यो।
ट्रफिकले जरीवाना काट्दै गर्दा एक प्रहरी जवान सिट बेल्ट नलागएको अवस्थामा लाइसेन्स समेत नभएको र ब्लु बुक समेत नलिएर बोलेरो चडेर आए । ती युवक हरुले कानुन सबैलाई लाग्छ भन्दै प्रहरीकोपनी चिट काट्न आग्रह गरे ।
लाइसेन्स नभएका प्रहरी, नियामक निकाय खोइ? चौथो अंग नै नियामक निकाय हो
यता ट्रफिकले चिट काट्न नमानेपछि उनिहरुले कानुन सबैलाइ लागू हुन्छ भन्दै ती प्रहरीको जरीवाना काट्न पठाएर प्रहरीले लाइसेन्स नबोक्नेे भन्दै भिडियो बनाए।
यस घटना बाट थाहा हुनछ कि प्रहरीहरुले समेत लाइसेन्स बिना गाडि चलाउँछन । उनिहरुलाई कारबाही कस्ले गर्ने। लाइसेन्स नभएका प्रहरीले कसैलाइ किचेर मारिदिए के हुन्छ? उनिहुलाई कस्ले नियम सिकाउने? तर जुझारु युवाहरुले चिट काट्न पठाएरै छोडे ।
लेखक सन्दिप योगी ओएस नेपाल ग्लोबल अनलाइन पत्रीकाका उप-सम्पादक हुन ।